Sekuqubuke umsindo ngohlelo lukaKelly
BAFUNA kumiswe ukukhonjiswa kohlelo lukaKelly Khumalo kwiShowmax Isithombe:ESIGCINIWE
Charles Khuzwayo | June 11, 2022
ABE-SHOWMAX bathi ngeke baluhoxise emoyeni uhlelo olukhuluma ngempilo yangempela yomculi we-Afro pop, uKelly Khumalo, phezu kokuba kukhona abafaka ingcindezi ngokuba lungabe lusakhonjiswa ngenyanga ezayo ngenxa yamacala asolwa ngawo.
Iningi labantu bakuleli lifuna kubhuntshe ukusakazwa kohlelo lukaKelly Khumalo kwiShowmax emuva kokuputshuka kwedokodo lesibili lapho kuqulwa khona icala ngokubulawa kowayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana, uSenzo Meyiwa, eNkantolo eNkulu yasePretoria ekuqaleni kwesonto.
Ngokwedokodo elavulwa ngo-2019 wuPhiko lwezokuShushiswa koMphakathi (NPA), uKelly, udadewabo uZandie Khumlo-Gumede, unina uGladness Khumalo, umngani kaSenzo uTumelo Madlala, uMthokozisi Thwala nomakhelwane wakwaKhumalo, uMaggie Thwala, kumele babhekane necala lokufa kweqhawe elinguSenzo eVosloorus ngo-Okthoba 26, 2014.
Idokodo lithi kumele babekwe icala lokubulala nelokudukisa ingalo yomthetho. Okunye okubangele uKelly amazinyo abushelelezi yinkulumo ka-Advocate Malesela Teffo lapho esole uKelly ngokudubula uSenzo ngephutha esebenzisa ivolovolo elalifike noLongwe.
Njengoba wuhlelo olukuthatha lukubeke ngempilo kaKelly luzokhuza ibuya ngoJulayi 5 kwiShowmax, abanye abantu bakuleli bathukuthele bayaqhuma, bafuna luhoxiswe. Ekhuluma emazwibeleni ohlelo, uKelly udalula ukuthi abantu banyanya ukuthi wuyena ongafanga ngosuku okwabulawa ngalo uyise wengane yakhe.
Omunye wabantu abangezwa lutho ngokubuya kohlelo lukaKelly, nguThabo Mashego. Ubhale ukuthi yena uhlelo azimisele ngokulubuka yilapho uKelly noZandie bebhadla ejele. "OkukaLongwe Twala kufanele ajoyine igenge engama-28 ejele iSun City." UNoxy Zondo ubuze ukuthi umkhankaso wokuqeda ngoKelly udlondlobala nini.
"Lolu hlelo ludinga ukuhoxiswa noma siphila kwaKhumalo Africa."
Oyinhloko yezinhlelo ezisakazwa kwiMultiChoice, uNomsa Philiso, utshele Isolezwe ngoMgqibelo, ukuthi bona bajabule njengoba sekuntwela ezansi ecaleni.
"Thina sithakasile ngokuthi emuva kweminyaka kunamahlebezi namahemuhemu ngokubulawa ngesihluku kukaSenzo Meyiwa, ekugcineni icala seliqulwa enkantolo. Nomphakathi waseNingizimu Afrika, silinde isinqumo sejaji." Uthe kufanele kucace ukuthi uhlelo iLife With Kelly Khumalo alubhaliwe phansi futhi aluvuni zenzo zamuntu.
"Njengoba singazivuni izenzo zabalingisi abayizintandokazi bezinhlelo enizifela ngazo nezenzo zababambe iqhaza kuma-documentaries, uKelly Khumalo ngomunye wabaculi abanegalelo ekuguquleni isikompilo laseNingizimu Afrika. Ngakho iSeason 3 izonikeza abalandeli nabamngabazayo wonke umsoco ngempilo yakhe manje," kuphetha uNomsa. Imizamo yokuthola ukuphawula kukaKelly ayiphumelelanga ngoba wenqabile ukuphawula engalitholanga igunya kubameli.